Tonsillectomy (အာသီးဖြတ်ခြင်း) : ခွဲစိတ်မှုက ဘာလဲ။ ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘာတွေဆိုးကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာတွေအတွက် | Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ခွဲစိတ်ကုသမှုများ » Tonsillectomy (အာသီးဖြတ်ခြင်း)
လည်ပင်းပြန်ရည်ကျိတ်အစုအဝေးတွေထဲမှာ တခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အာသီးဟာ ကျွန်တော်တို့ ရှုသွင်းလိုက် ဒါမှမဟုတ် မြိုချလိုက်မိတဲ့ ပိုးမွှားတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရာမှာကူညီပေးပြီး အဆိုပါ အာသီးဖြတ်ထုတ်ခြင်းကို အာသီးဖြတ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အာသီးပိုးဝင်တဲ့အခါ Tonsillitis ဆိုတဲ့ အာသီးရောင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နာကျင်ခြင်း၊ဖျားနာခြင်း နဲ့ အစာ၊ရေမြိုရခက်ခြင်းတို့ကို ခံစားရစေပါတယ်။
မကြာခဏ အာသီးရောင်ခြင်းကို ထိရောက်စွာ တားဆီးပေးနိုင်မယ့် တခုတည်းသော နည်းလမ်းက အာသီးဖြတ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာသီးဖြတ်ထုတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင်ခံစားနေရတဲ့ လည်ချောင်းခဏခဏနာခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ။
အာသီးဖြတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေက ဘာလဲ။
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးကာလကြာရှည်စွဲသောက်ခြင်းဟာ ကလေးတွေမှာ အာသီးခဏခဏရောင်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပေမယ့် အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးတွေမှာတော့ သိပ်ထိရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး (အထူးသဖြင့် အကျိတ်ရောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဖျားတက်ခြင်းတွေမှာပေါ့)။ ပြင်းထန်ခြင်းမရှိတဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ လည်ချောင်းနာခြင်းတွေကိုပဲ ခွဲစိတ်မှုက အဓိက ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဘက်တီးရီးယားထက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်မှုတွေကိုပဲ ကာကွယ်ပေးမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ခွဲစိတ်မှုဟာ အချို့သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ၊အန္တရာယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင်မှာ သေချာစွာကြိုတင်သိရှိနားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မရှင်းလင်းတာ၊မေးမြန်းချင်တာတွေရှိရင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ရောဂါရှိမရှိ၊လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးရှိမရှိ ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ရှိမရှိတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင်မှာ မေ့ဆေးဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုလည်း ဆွေးနွေးရပါမယ်။
ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင် အချိန်ဘယ်လောက်အလိုမှာ အစားအသောက် လုံးဝမစားရတော့ဖူးဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို အတိအကျ ဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ။ ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင် အစားအသောက်စားလို့ရမရ အပါအဝင် အရေးတကြီးလိုက်နာစရာအချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင် ခြောက်နာရီလောက်အလိုလောက်ကစပြီး ဘာမှမစားရတော့ပါဖူး။ ဒါပေမယ့် ကော်ဖီအစရှိတဲ့ သောက်စရာတွေကိုတော့ မခွဲခင် နာရီအနည်းငယ်အလိုအထိ သောက်နိုင်ပါတယ်။
အာသီးဖြတ်ခြင်း ခွဲစိတ်မှုကို ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ။
ခွဲစိတ်မှုကို မေ့ဆေးပေးပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး နာရီဝက်လောက် ကြာမြင့်လေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ပါးစပ်ထဲမှတဆင့် အာသီးကို ဖြတ်ထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာသီးကို အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားအလွှာကနေ ခွာထုတ်၊ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပြီး အာသီးကို လုံးဝဖယ်ရှားဖို့နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ သွေးတိတ်သွားစေဖို့အတွက် အပူကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ရောင်ခြည်ကိုသုံးပြီး အာသီးကို ဖျော်ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့နေရာတွေက သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာရင် သင့်ဆရာဝန်က သင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး သွေးတိတ်စေပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက်တရက်မှာ ဆေးရုံက ဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲပြီးနှစ်ပတ်လောက်အထိ နာကျင်မှုကဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး မနက်အိပ်ယာထချိန်တွေမှာ ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနဲ့ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ ကျောင်း၊ရုံး ဒါမှမဟုတ် လူစုလူဝေးရှိတဲ့ နေရာတွေကို သွားလို့မရသေးပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပေးရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ မူလအတိုင်း လှုပ်ရှားသွားလာမှုပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းစတင်မပြုလုပ်မီ ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။ တကယ်လို့ မေးချင်တာ ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်တာမျိုးလေးတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်လိုကုသမှုမျိုးမဆို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြဿနာကတော့ ရှိတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်ကို အသေအချာ ကြိုတင်မေးမြန်းရပါမယ်။ ဘယ်လိုခွဲစိတ်မှုမျိုး၊ကုသမှုမျိုးမှာမဆို မေ့ဆေး သို့မဟုတ် ထုံဆေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ၊ သွေးအလွန်အကျွံထွက်တာ ဒါမှမဟုတ် သွေးခဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အာသီးဖြတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးတွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့-
အာသီးအစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ် ကျန်ခဲ့ခြင်း။
အာသီးဘေးနားမှာရှိတဲ့ အကျိတ်လေးတွေ ရောင်ခြင်း (Lingual tonsillitis)။
လည်ချောင်းထဲမှာ တခုခုရှိနေသလို ခံစားရခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၊နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေ (ဥပမာ အစာမစားဖို့၊သုံးစွဲနေတဲ့ တချို့ဆေးတွေကို ရပ်ထားဖို့ စသည်)ကို ဂရုတစိုက်လေးစားစွာ လိုက်နာရပါမယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 13, 2019
http://www.nhs.uk/Conditions/Tonsillitis/Pages/Treatment.aspx. Accessed July 6,
Tonsillectomy http://www.healthline.com/health/tonsillectomy. Accessed July 6,